Ufundo lwam olulandelayo: Martech Zone
Ufundo lwam olulandelayo:
NgoLwesibini, Matshi 25, 2008 NgoMvulo, Matshi 7, 2016 Douglas Karr
Okulandelayo kuluhlu lokufunda (olonyuka ngokwenene) ngu Intengiso yomxhuzulane.
Abantu abalungileyo eWiley bandithumele iNcwadi yokuThengisa- kufuneka ukuba baqonde ukuba ndiyincwadana yeencwadi zokuThengisa. Kwabo bathintela iincwadi zeshishini ezifana nesibetho kodwa nithanda ukufunda indlela yokuziphatha kwabantu… yile nto ndiyithandayo ngencwadi yeNtengiso.
Umntu wandibuza kanye ukuba ndiyifundile na intlalontle. Ndicinga ukuba ngandlela thile… ndiyakholelwa ukuba yile nto ithengiswayo. Andizibangi ndiqonda okuninzi malunga nokuziphatha komntu, kodwa ndiyathanda ukuyijonga kwaye ndibelane ngento endiyibonayo.
Intengiso yomxhuzulane, inzululwazi yokutsala abaThengi, inesiciko esityebileyo, esidibeneyo isayithi, ibhlog edibeneyo, kunye nenkcazo entle:
Ukuthengisa ngamandla omxhuzulane kubonelela ngoosomashishini, abanini bamashishini, abantu abathengisayo kunye noochwephesha bokuthengisa indlela elula yokutsala abathengi kunye nokuvala ukuthengisa ngaphandle kokwenza umsebenzi wokuthengisa ngesandla njengokufowuna okubandayo, ukubhengeza okanye ukucela ishishini.
Ebhalelwe abantu abanqwenela ukuthengisa, inzuzo, abathengi kunye nemali epokothweni kodwa banokukhetha ukuyenza ngaphandle kwemisebenzi yezandla, le ncwadi ityhila imigaqo yokutsala abathengi ngokwendalo kwaye ngokulula nangokungazami ukwenza ukuthengisa ngaphandle kokunyanzelwa, in¬your¬face, hardsell amaqhinga. Idibanisa ingcebiso esebenzayo esekwe kwiindlela ezivavanyiweyo nezingqiniweyo ezinemiqolo yemingxunya, intambo ephezulu engenazingcingo kunye namava okuthengisa.
Andinguye otyhafileyo, kodwa andizukuyenza gweba incwadi ngokugubungela [kujoliswe]. Izicatshulwa zabanye ababhali zivakala ngathi le ncwadi iyahlekisa, ibetha nzima, nasebusweni bakho. Ayivakali njengentengiso njengeentengiso… kuvakala ngathi yincwadi endiya kuyonwabela.
Unokuzikhuphelela Isicatshulwa seNtengiso yeGrivity kwiwebhusayithi yababhali. Ndiza kwabelana ngoluvo lwam ngencwadi kwiiveki ezimbalwa nje ndakuba ndiyigqibile.
tags: ukutsala abathengiintengiso yomxhuzulaneUJimmy VeeUJoel Bauerincwadi yentengisoUTravis Millerwiley
5PM: I-SaaS yoLawulo lweProjekthi epheleleyo
Ikhutshwe: MyBlogLog kunye neBlogCatalog Widgets
Mar 25, 2008 ngo 8:35 PM
Oku kukhangeleka njengencwadi enkulu. Ndinqwenela ukuba bandithumelele ikopi ukuze ndifunde kwaye ndiphonononge. Ndiyakongeza kuluhlu lwam, olukhula ngokuxhuma kunye nemida ngoku.
Mar 31, 2008 ngo-8: 36 AM
Ndiyayithanda imbono yokuba nabathengi beze kuwe-ngomxhuzulane. Leyo yeyona ndlela ilungileyo, ukuba umthengi ukholelwa ekubeni bebefuna imveliso kwasekuqaleni, ayikuko ukuba uyityhalile imveliso kubo. Enkosi ngeentloko phezulu kule ncwadi.